Siyaasadda Federaalka - Isbahaysiga Caafimaadka ee Muhaajiriinta & Qaxootiga
Bogga ugu weyn / Siyaasadda /
Sharciga Dhalashada Mareykanka 2021 (HR 1177)
Waxaa soo bandhigay Wakiilka Linda Sanchez (D-CA) bishii Febraayo 2021, sharcigan wuxuu aasaasayaa waddo loo maro muwaadinimada shaqsiyaadka aan sharciga lahayn qaarkood, iyo waxyaabo kale oo dhowr ah. Fadlan eeg halkan si aad u hesho macluumaad dheeraad ah oo ay ku jiraan soo koobid, halka ay hawshu ka socoto, iyo sidoo kale nooca Senate-ka ee isku midka ah ee biilkaS.348).
Hordhacii caleema-saarka Madaxweyne Biden, khubaradu waxay saadaalinayeen isbeddelada siyaasadeed ee maamulka cusubi dejin doono - iyo sida ugu dhakhsaha badan. Bishii Febraayo 2, wax ka yar laba toddobaad markii uu xafiiska la wareegay, Madaxweyne Biden wuxuu saxiixay saddex amarro fulineed oo saameynaya siyaasadda socdaalka. Amarada fulintu waxay u igmadeen waxyaabaha soo socda:
Abuuritaanka guddi howleed mideeya qoysaska. Guddigan ayaa meel ka heli doona waalidiinta ama dadka masuulka ka ah kumanaan carruur ah oo laga reebay qoysaskooda maamulka Trump. Waxay sidoo kale si joogto ah uga warbixineysaa horumarkiisa laga bilaabo 120 maalmood kadib saxiixa amarkan fulineed.
Soo celinta nidaamka magangalyada. Intii ay jirtay maamulkii Trump, geeddi-socodka raadinta iyo helitaanka magangelyo wuxuu noqday mid aad u dhib badan oo qaxooti badan lagu qasbay inay ku sugaan Mexico inta ay magangelyo-doonka ahaayeen. Tani waxay dhalisay waxa ay dad badani ugu yeereen dhibaato bina-aadamnimo oo ka dhacday xadka Mareykanka iyo Mexico. Amarka Biden wuxuu doonayaa inuu soo celiyo hanaan magangalyo oo bini aadamnimo ka badan.
Dib u eegista xeerka eeddeynta dadweynaha. Hay'adaha socdaalka ayaa la faray inay ka eegaan sharcigan maamulka cusub, kaasoo doonaya inuu abuuro nidaam loo dhan yahay. Bishii Maarso 9, 2021, xeerka eedeynta dadweynaha ayaa la joojiyay markii Waaxda Caddaaladda ay go’aansatay in ay joojiso difaaca xukunka, Maxkamadda Sare ee Mareykanka ayaa laashay dhammaan racfaannadii laga sugayay ee la xiriiray xeerka, halka Wareeggii 7aadna uu diiday dalabkii dowladda. Tani waxay guul weyn u tahay soo galootiga iyo u doodayaasha, hadana waxay amaan u tahay muhaajiriinta inay helaan waxtarka dadweynaha iyagoon ka cabsi qabin imtixaan laga qaado dadweynaha.
Amaradaan fulineed waxay daba socdaan kuwii la saxiixay maalintii koowaad ee xafiiska Biden, markii uu badalay inbadan oo kamid ah siyaasadihii madaxweynihii hore Trump, oo ay kamid yihiin:
Ka noqoshada xayiraadaha safarka ee dalalka muslimiinta u badan iyo ummadaha kale maamulka Trump. Si kastaba ha noqotee, habraacyada baaritaanka amniga ee socdaalayaasha noocan oo kale ah ayaa sii jiraya xilligan.
Joojinta masaafurinta 100 maalmood ee soogalootiga badankood (laga bilaabo Janaayo 22), marka laga reebo kuwa ku howlan argagixisada, gala dambiyada, khatarta ku ah amniga qaranka, ama yimid Mareykanka wixii ka dambeeyay Nofeembar 1, 2020. Intii lagu gudajiray aafada , Hakinta masaafurinta ayaa kahortagi doonta dhaqdhaqaaqa aan loo baahnayn waxayna u ogolaaneysaa wakaaladaha socdaalka inay xooga saaraan ilaha mideynta qoysaska iyo la dagaalanka COVID-19 xarumaha dadka lagu hayo.
Joojinta dhismaha darbiga dhisida iyo baabi’inta $ 10 bilyan oo doolar oo madaxweynihii kahoreeyay u weeciyay dhismaha darbiga. Biden ayaa la filayaa inuu ka tago darbiga xadka si diirada loo saaro dadaallada amniga xuduudaha iyo maalgelinta meelo kale, sida maalgelinta dadaallada caafimaadka iyo amniga ee hay'adaha socdaalka.
Xoojinta Waxqabadyada Dib Loo Dhigay ee loogu talagalay Imaatinka Carruurnimada (DACA), oo hadda ilaaliya 650,000 "Dreamers", sida xubnaha barnaamijka loo yaqaan. Taageero dheeraad ah oo ku saabsan ama ballaadhinta barnaamijka ayaa lagu dari karaa biilka dib-u-habeeynta Biden.
Dhameynta barnaamijka xadka ee "Ku sii jir Mexico" oo u baahan muhaajiriinta magangalyo doonka ah ee Mareykanka inay deggaan Mexico inta ay sugayaan dhageysiga iyo go'aannada. Horay u socoshada, ma jiraan magangalyo doon cusub oo lagu meeleyn doono barnaamijka. Si kastaba ha noqotee, kuwa hadda lagu meeleeyay barnaamijka dib looma rarayo.
Joojinta adeegsiga erayga bani'aadamnimada iyo erayga ah "shisheeyaha sharci darrada ah" laguna beddelo "muwaadin aan dhalasho lahayn," waa tallaabo ay dad badani u arkeen inay tahay isku day lagu doonayo in sharaf iyo qaddarin lagu geliyo siyaasadda socdaalka.
Bishii Juun 16, 2021, Xeer Ilaaliyaha Guud Merrick Garland wuxuu raacay Eid Biden dib u soo celinta nidaamka magangalyada isagoo amar ku bixiyay in la beddelo laba go'aan oo uu horay u soo saaray Garyaqaanka Guud Jeff Sessions ee 2018. Tan macnaheedu waxa weeye, ilaa laga soo saarayo xeerar cusub, garsoorayaasha socdaalka waxay siin karaan magangelyo sidoo kale shakhsiyaad ku saleysan hanjabaad xadgudub guri ama rabshado ka yimaada burcad.
Isku soo wada duuboo, ficiladani waxay matalayaan isbedel muuqda oo ku wajahan siyaasada socdaalka, iyo sidoo kale caafimaadka iyo badbaadada muhaajiriinta. Isbeddelkani wuxuu si weyn u yareyn karaa buuqa iyo cabsida masaafurinta ee bulshooyinka soogalootiga ah (go'aamiyaha bulshada ee caafimaadka oo si isdaba joog ah loogu muujiyey inuu si xun u saameynayo caafimaadka isla markaana uu gacan ka geysanayo dhibaatooyinka caafimaad ee socda).